ချစ်စရာ ကိုယ်လုံးလေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်အောင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အမိုက်စားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ G ရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ချစ်စရာ ကိုယ်လုံးလေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်အောင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အမိုက်စားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ G ရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး
By Cele MinPosted on January 9, 2021 January 9, 2021
တက်သစ်စ အဆိုတော် မလေး G က တော့ အခုဆို ရင် ဂီတ လမ်းကြောင်း ပေါ် မှာ စတင် လျှောက် လှမ်း နေပြီ ဖြစ် သလို အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို တစ်ဖက် တစ်လမ်း က နေ လုပ်ကိုင် နေတာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်.. ။ G က ရွှေနန်းတော် ရတနာဆိုင်ရဲ့ သမီး ချောလေး ဖြစ်ပြီး အရမ်း ကို ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ တဲ့ မျိုးရိုးက နေ ဆင်းသက် လာတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ လည်း G က မာန်မာန တွေလုံးဝ မရှိဘဲ ပကာသန ကင်းပြီး အားလုံးနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေစွာ ဆက်ဆံ တတ် တာ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ က သူမ ကို ပိုချစ်နေ ရတာ ဖြစ် ပါ တယ် … .
စိတ်ထား ဖြူစင် ပြီး သဒ္ဓါတရား ထက်သ န်တဲ့ G က အခုလို ကာလ မှာ တောင် လူနာ တင်ကားကို ကိုယ်တိုင် မောင်းပြီး ပရဟိတ အလုပ် တွေကို လုပ်ကိုင် နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … . လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေ ကို ကူညီပေး နေတဲ့ G က Live Sale တွေ ရောင်းချရင်း ရလာတဲ့ အနုပညာ ကြေး တွေနဲ့ အလှူ လုပ် လေ့ ရှိတာ ဖြစ် ပါ တယ်..။ ငယ်ရွယ် နုပျို ပြီး လှသွေး ကြွယ် နေတဲ့ G က အမြဲတမ်း လိုလို ဘာမှ မလိမ်းခြယ်ဘဲ နေတတ် ပေမယ့် ပြင်ပြင် ဆင်ဆင် နေ လိုက်တဲ့ အခါ မှာ အားလုံးငေး ရလောက် အောင် ကို လှနိုင် လွန်း တာ ဖြစ်ပါ တယ် … .
အခု လည်း G က အမိုက်စား ဖက်ရှင် တွေကို တစ်ထည် ပြီး တစ်ထည် ဝတ်ဆင် ပြီး အထာ ကျကျ Tik Tok ကစား ပြထား တာ ဖြစ်ပါ တယ်.. ။ မြင်နေကျ ပုံစံနဲ့ လုံးဝမတူ အောင်ပြောင်းလဲပြလိုက် ပြီး အရမ်း လှနေ တဲ့ G က အပြစ် အနာ အဆာကင်းတဲ့ အသား အရေလေး နဲ့အတူ ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ အလှတရား တွေ ပေါ်လွင် နေတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ ချစ်ပရိသတ် တွေ အတွက် အဆိုတော် မလေး G ရဲ့Tik Tok ဗီဒီယိုလေး ကို အောက် မှာ ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … .
source & video credit : “ G Vocals ” Tik Tok Acc
တက္သစ္စ အဆိုေတာ္ မေလး G က ေတာ့ အခုဆို ရင္ ဂီတ လမ္းေၾကာင္း ေပၚ မွာ စတင္ ေလၽွာက္ လွမ္း ေနၿပီ ျဖစ္ သလို အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကို တစ္ဖက္ တစ္လမ္း က ေန လုပ္ကိုင္ ေနတာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္.. ။ G က ေရႊနန္းေတာ္ ရတနာဆိုင္ရဲ့ သမီး ေခ်ာေလး ျဖစ္ၿပီး အရမ္း ကို ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝ တဲ့ မ်ိဳးရိုးက ေန ဆင္းသက္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဒါေပမဲ့ လည္း G က မာန္မာန ေတြလုံးဝ မရွိဘဲ ပကာသန ကင္းၿပီး အားလုံးနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ ဆက္ဆံ တတ္ တာ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ က သူမ ကို ပိုခ်စ္ေန ရတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
စိတ္ထား ျဖဴစင္ ၿပီး သဒၶါတရား ထက္သ န္တဲ့ G က အခုလို ကာလ မွာ ေတာင္ လူနာ တင္ကားကို ကိုယ္တိုင္ ေမာင္းၿပီး ပရဟိတ အလုပ္ ေတြကို လုပ္ကိုင္ ေနတာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … . လိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြ ကို ကူညီေပး ေနတဲ့ G က Live Sale ေတြ ေရာင္းခ်ရင္း ရလာတဲ့ အႏုပညာ ေၾကး ေတြနဲ႔ အလႉ လုပ္ ေလ့ ရွိတာ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ိဳ ၿပီး လွေသြး ႂကြယ္ ေနတဲ့ G က အျမဲတမ္း လိုလို ဘာမွ မလိမ္းျခယ္ဘဲ ေနတတ္ ေပမယ့္ ျပင္ျပင္ ဆင္ဆင္ ေန လိုက္တဲ့ အခါ မွာ အားလုံးေငး ရေလာက္ ေအာင္ ကို လွနိုင္ လြန္း တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
အခု လည္း G က အမိုက္စား ဖက္ရွင္ ေတြကို တစ္ထည္ ၿပီး တစ္ထည္ ဝတ္ဆင္ ၿပီး အထာ က်က် Tik Tok ကစား ျပထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္.. ။ ျမင္ေနက် ပုံစံနဲ႔ လုံးဝမတူ ေအာင္ေျပာင္းလဲျပလိုက္ ၿပီး အရမ္း လွေန တဲ့ G က အျပစ္ အနာ အဆာကင္းတဲ့ အသား အေရေလး နဲ႔အတူ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ အလွတရား ေတြ ေပၚလြင္ ေနတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ခ်စ္ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ အဆိုေတာ္ မေလး G ရဲ့Tik Tok ဗီဒီယိုေလး ကို ေအာက္ မွာ ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ပုံတင်ရင်းမပေါ်သင့်တာတွေ ပေါ်သွားလို့ ရှင်းပြနေတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ အသံကြောင့်မျက်လုံးတွေပြူးသွားတဲ့ နိုင်လူရဲ့ Tik Tokဗီဒီယိုလေး
Next post ပုရိသတို့ရင်ကို ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် စပါယ်ရှယ် ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး နွယ်နွယ်ထွန်း